Ny sasany, miala sasatra… | NewsMada
Fotoam-pialan-tsasatra tokoa izao. Misy ireo efa lasa nialoha, namonjy ambanivohitra na morontsiraka, na any ivelany mihitsy. Arakaraka ny fahafahana rahateo io. Tototra sary avy any anaty fialan-tsasatra any ireo tranonkalan-tserasera, ifanakalozana amin’ny alalan’ny “internet”.
Tena sahirana marina ve ny Malagasy? Raha ireny no tarafina, mampametraka izay fanontaniana izay tokoa. Fa tsy ampy hitarafana izay mitranga eto Madagasikara anefa ny any anaty “Facebook” sy izay mitovy aminy rehetra any. Izay tiana haseho no mivoaka any. Izay tiana hovoizina ka halentika an-tsaina no miseho ao.
Mila miala anatin’izay tontolo “ivelany”, asehon’ny teknolojia izay, izay tena te hahalala ny zava-misy marina. Tsy mila mandeha lavitra, na eto Antananarivo aza. Mila mihodina kely ao ambadik’ireo tranobe mijoalajoala eny Ampefiloha fotsiny, dia mahita ny andavanandron’ny eny amoron’ny lalamby, ohatra. Raha tena te hahita ny halaliny, mandeha any atsimo mihitsy, mahita mivantana izany hoe tsy fahampian-tsakafo sy rano izany.
Ny sasany miala sasatra, ny hafa mihasasatra… Mety hoe fiangaran’ny fiainana misy maneran-tany izany, saingy ngeza loatra ny hantsana manasaraka ny manan-katao sy ny farahidiny eto Madagasikara. Tsy sanatria fanomezan-tsiny ireo afaka miala sasatra akory, satria nisy koa ny ezaka sy fifoforana mandavantaona matoa afaka mba manao izany. Mitodika kosa amin’izay tompon’ny fanapahana sy izay manana fahefana, na dia bitika monja aza, afaka manova zavatra eto amin’ny firenena. Sao mba afaka manena, na ampahany ihany aza, amin’ny fahantrana mihatra amin’ny taolana, mahazo ny mpiray tanindrazana maro? Aleo mandry ny saina vao miala sasatra…